Mpempe akwụkwọ Ikpeazụ Concorde DOWNLOAD-A 2011 FSX - Rikoooo
downloads 82 603
Ebe a bụ ọhụrụ 3d nlereanya nke Concorde nke na-agụnye: a ọhụrụ imi udi, visor nkọwa, ụgbọ elu Ọnọdụ, zuru ezu ezigbo textures ngwugwu -new tupu Production texture- doro anya textures maka VC ogwe, pụrụ iche utịp maka wings' vortices na foogu, afterburner mmetụta , ọdịda lights'-aga aga jikọrọ ọdịda Kwadobe ọrụ, animated visor maka isi 2D kokpiiti echiche, mach ọsọ mmetụta (Mr. Rob Barengredt's).
Ihe niile a na-achịkwa site na Xml gauges nke Maazi HANS ZUIDERVAART nke dị oke elu mekwara ka ọ gbanwee ọtụtụ mgbanwe maka nrụpụta ụgbọ elu, (ọtụtụ ekele maka enyemaka ya !!!!), gauges na-agbanwe agbanwe na VC (niile na FS9, ụfọdụ na FSX), ụda, VC, echiche ndị njem, ọkụ elegharịrị anya na nke zuru oke, akụkụ ihe nkiri zuru oke, (ihe ndị na-anya ụgbọelu na copilot maka rudder, mbuli elu na arụmọrụ ala), ọnụ ụzọ ụlọ na mbupu ibu, wdg.
Nke a na version adịghị Dochie gara aga nsụgharị, WICH a ga-ewepụrịrị MBỤ. NO fixes MKPA
- Full animated akụkụ, na iji tipical iwu.
- Agbasapụ ọdịda ìhè: Ha ga-akpaghị aka ịgbatị: mgbe ka na ala, gbanye ọkụ; mgbe na-efe efe, ịgbatị ọdịda Kwadobe na-atụgharị na ọkụ.
- Open / nso ulo ụzọ, pịa gị TAILHOOK iwu.
- Njem ụzọ: pịa "" mgbanwe + E ".
- Ndị ọzọ ọnụ ụzọ: pịa "" mgbanwe + E + 2 ".
- Agbasapụ imi na visor maka na-apụ, "F7" ugboro abụọ.
- Agbasapụ imi maka mbụ na-eru nso usoro (ọ bụghị ngwa ngwa karịa 370 mara akpụ): pịa "F7" ozugbo.
- Agbasapụ imi maka nke abụọ na-abịa usoro (ọ bụghị ngwa ngwa karịa 325 mara akpụ): pịa "F7" otu ugboro ọzọ.
- Agbasapụ imi nke ikpeazụ aproach (270 mara akpụ): pịa "F8" (full flaps).
- Ugbu a, visor na isi 2D kokpiiti echiche na-esere ndị a otu njikwa !!!
- Oru ugbo si mmegharị nwere ike hụrụ na mputa anya na VC mgbe na-arụ ọrụ ruda, mbuli na ọdịda Kwadobe.
- Laa azu: pịa "F2" dị mgbe emetụ (lee aga aga on engines'exhausts).
- Engines' intakes animated dabere na trotul.
- Jiri "Ctrl + J" ma gbanyụọ engines iji rụọ ọrụ airports'service ugbo ala mgbe na-adọba ụgbọala.
Onye edemede: Libardo Guzman